चीनको नयाँ ‘वन्यजन्तु कानुन’ ले अर्को महामारी रोक्न सक्ला?
आरोन ह्वाइट शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७
जैविक विविधता, हरेक प्राणीको जीवन प्रणाली यसैमाथि निर्भर छ। तर, एकदमै तीव्र गतिमा जैविक विविधता प्रणाली भत्किन थालेको छ। जैविक विविधतामाथि देखा परेका संकटका धेरै पाटाहरूलाई वर्ष २०२० ले ‌ओझेलमा पारिदिएको छ।
सायद जैविक विविधताको क्षेत्रमा यो एउटा ‘उत्कृष्ट वर्ष’ हुनेथियो। किनकी विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरूले धेरै प्रकारका बाचाहरू गरेका थिए। अन्तरदेशीय सम्झौताहरू भएका थिए। तर, एउटा महामारीका कारण ती सबै कामहरू केही पनि हुन सकेनन्।
कोरोना संकट, जसले ५ करोड ५ लाखभन्दा धेरै मानिसलाई संक्रमित बनाइसकेको छ। र यो महामारी सिधै चीनको वुहान सहरसँग जोडियो, जुन सहर वन्यजन्तुको व्यापारले विश्वमै चर्चित छ।
अहिले वन्यजन्तुको व्यापारले नै महामारीलाई फैलाउन थप मद्दत गरेको भन्दै विश्वमै उच्चस्तरीय छलफलहरू भएका छन्। यसको मतलव कम्तीमा केही समयका लागि भए पनि जनावरमाथि हुँदै आएको व्यापारिक वा व्यावसायिक शोषण रोक्नुपर्छ भन्ने नै हो।
प्राकृतिक वासस्थान मासिँदै जानु, जलवायु परिवर्तन, पशुपंक्षीको औद्योगीकरण तथा वन्यजन्तुको शोषण जैविक विविधता संकट र महामारीको जोखिम निम्त्याउने प्रमुख कारणहरू हुन्।
अहिलेसम्म कोभिड-१९ कसरी फैलियो भन्ने कुरा सायद कसैलाई थाहा छैन। तर, यो एउटा चमेरा प्रजातिबाट मानिसमा संक्रमण भयो भन्ने एउटा प्रारम्भिक आंकलन छ। र यो सत्य हो कि एउटा धेरै लामो समय संसारले वन्यजन्तुको व्यापारमा बिताइसकेको छ।
गत फेब्रुअरीमा भएको एउटा विश्वव्यापी सम्मेलनमा धेरै देशहरूको वन्यजन्तुको व्यापारबारे ध्यान केन्द्रित भएको छ। यसले अझ सावधान बनाएको छ। र आशा पनि जगाएको छ। यही बेला चीनले भने सबै प्रकारका जनावरको व्यापारमात्रै होइन यिनको मासु खान पनि कडा प्रतिबन्ध लगायो।
त्यही बीचमा चीन सरकारले देशमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि कानुनमा हरेफेर गरेर अझैं कडा बनाउने घोषणा गर्‍यो।
यद्यपि, यो कानुन लामो समयसम्म विवादित भयो। किनकी मूलत: वन्यजन्तु संरक्षणका लागि ल्याइएको कानुन भनेपनि यसका भाषा प्राय लोपोन्मुख जनावरको समेत व्यापार र व्यसायका लागि अनुमति दिनेखालका छन्।
यो घोषणासँगै चिनियाँ गैरसकारकारी संस्थाहरू, वौद्धिक वर्ग, स्वास्थ्य विज्ञ तथा सांसदहरूलेसमेत चीनका परम्परागत औषधी उद्योगहरूमा वन्यजन्तुको प्रयोग रोक्न सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरेका थिए।
झन्डै एक वर्षपछि धेरै राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित पनि भयो र अहिले त्यो कानुनको ड्राफ्ट प्रकाशित पनि भयो। तर, परिणामत: यो कानुन एक अन्योलपूर्ण र निराशाजनक कागजमात्रै भइदियो।
त्यस्तै, सरकारले कोरोनाका कारण वन्यजन्तु व्यापारमा उत्पन्न भएको चिन्तामा प्रतिक्रया जनाउँदै वन्यजन्तुको उपभोग, उत्पादन, बेचविखन र उपभोगमा रोक लगाउने भएको छ।
यदि यसलाई नैतिक रुपमा कडाई गरेर लागू गरिए र कृषकहरुलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए, जनावरहरुका लागि यो एकदम सुखद समाचार हुनेछ।
यद्यपि, यो कानुनले प्रदर्शन, परम्परागत औषधीका लागि जनावरहरुको बिक्रीवितरणका लागि अनुमति दिइएको छ। यसबाहेक लोपोन्मुख समूहमा पर्ने कतिपय जीवजन्तुको बिक्रीका लागि समेत अनुमति हुनेखालका प्रावधानहरू यसमा राखिएको छ।
केही दशक अघि, ७ लाख ४५ हजार पेन्गोलिनहरु परम्परागत औषधीका लागि भनेर चीनमा गैरकानुनीरुपमा ओसार्दा, जफत गरिएका थियो।
२०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै यो प्राणीलाई व्यापारिक हिसाबमा बेच्न रोक लगाइएको थियो। तर, चिनियाँ अधिकारीहरुले स्थानीय रुपमा यसको व्यापारका लागि सहज गराइदिए।
एसियामा धेरैजसो अवैधानिक रुपमा बेचिने जन्तु हो चितुवा। यसको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै १९७५ देखि रोक लगाइएको थियो। अब केही सय जति जनावरहरु चीनमा रहेका छन्। तर पनि चितुवाको हड्डी वाइन र औषधी बनाउन पनि प्रयोग हुन्छ भनेर उत्पादन र बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको छ।
त्यस्तै साइगा एन्टीलोपको सिङ, भालुको पित्त, र पालिएका बाघका छालाहरु कानुनी रुपमै बिक्रीवितरण गर्न अझै पनि पाइन्छ।
पालेका जनावरहरुको बिक्री भएपनि वन्यजन्तुजन्य उत्पादनको माग पनि उत्तिकै बढेकोले जनावरहरुको कल्याणमा प्रभाव परेको छ।
नयाँ मस्यौदा गरिएको कानुनले जैविक विविधतामा केही असर त पर्दैन तर औषधीहरु बनाउने अनुमति दिएका जस्ता कारणले कोभिड-१९ जस्ता अन्य महामारी नआउला भन्न सकिँदैन।
यदि कानुन बनाउनेहरुले जनावरहरुको उपभोग, उत्पादन र बिक्री गर्दा लोपोन्मुख हुने र स्वास्थ्यमा खतरा आउन सक्ने सम्भावना देखाएर कानुन बनाइरहँदा किन एउटै कामलाई अर्को तरिकाबाट उपभोग गर्न अनुमति दिइएको छ?
कतिपय परम्परागत चिनियाँ औषधीहरुले खतरनाक वन्यजन्तुहरुको शरीरका भागहरु नै प्रयोग गर्दैनन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि चीनफिङले २०६० सम्म कार्वन तटस्थता बनाउनका लागि वातावरणीय नीति ल्याइएको बताएका थिए। आगामी मे महिनामा चीनले ‘कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटि’ कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ।
यसमा वन्यजन्तुकै संरक्षणका विषयमा छलफल हुनेछ। अन्य देशहरुले जस्तै आयोजक देशले पनि वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि उल्लेखनीय कार्य गर्नुपर्नेछ जसमा कानुन परिवर्तन पनि एक हो।
अझैपनि चीनको कार्यपालिका वन्यजन्तुको शोषणलाई रोक्नुपर्छ भन्ने विरुद्धमै उभिएको छ।